> Resource> égwu> Gịnị mere égwu Crash on iOS 8 na Solutions
Dị ka ọnụ ọgụgụ site Cittercism nke bụ ihe nchịkọta ike, na App okuku ọnụego bụ 65% elu on iOS 8 karịa na iOS 7 na n'otu oge ahụ ebe ọ bụ na wepụtara. Na anyị nwere ike ịchọta tọn ọrụ mere mkpesa nile di iche iche nke ngwa ọdịnala dị ka Facebook, Twitter na Evernote okuku na Apple Discussion Forum.
Mmelite: Dị ka ọhụrụ ọnụ ọgụgụ site Cittercism, na App akụghịna ọnụego ama ebelata si 3.6% (22nd Sept) na 2.6%, na ọ bụ 19% ala maka ngwaọrụ-agba ọsọ iOS 8.1 tụnyere ndị na-agba ọsọ na iOS 8 / 8.0.1 / 8.0.2.
Lee ndị 2 isi ihe mere nke nwere ike ime ka App okuku on iOS 8:
Dị ka anyị nile mara, tọn ọhụrụ na ọrụ kwukwara na iOS 8, na e nwere ihe fọrọ nke nta ugboro abụọ ọnụ ọgụgụ nke ọhụrụ APIs karịa iOS 7, otú apụghị izere ezere ọ ga-eme elu ngwa okuku ọnụego.
2. New Swift Programming Language
Ọhụrụ Swift mmemme asụsụ e wepụtara na nke a n'oge okpomọkụ nke nwekwara ike ịbụ akụkụ nke ihe mere nke ngwa okuku, ọ bụghị zuru okè, nke e nwere mgbe nsogbu tọrọ ntọala site na iji dị otú ahụ ọmụmụ akabeghị aka asụsụ.
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta dị otú ahụ banyere annoyed ngwa okuku nsogbu na iOS 8, ebe a bụ aro ole na ole i nwere ike a na-agbalị.
1. emechi ndị App na Multitasking tree
Ihe mbụ ga-amasị m na-agbalị na-emechi ndị akụghịna ngwa na Multitasking tree, ọ pụrụ nnọọ ngwa ozugbo ma hapụ ya na nhazi ebe nchekwa nke ngwaọrụ gị mere na ọ pụrụ amalite ọhụrụ oge ọzọ ị na imeghe ya. Dị ka anyị nile mara, na temp data nwere ike ịbụ a kwere omume mere maka ngwa n'iyi, n'ihi ya, mechie na ngwa ma re-ẹkedori ya nwere ike ịbụ dozie nsogbu gị.
2. Ike ibidogharịa
Ike ibidogharịa mgbe ezigbo agbalị idozi nile di iche iche nke iPhone nsogbu. Mechie niile nke ngwa ọdịnala na gbanyụọ ị iPhone apụ, biko ịnọgide na-ejide Home & Ike buttons ruo mgbe ihuenyo atụgharịa anya na mgbe ahụ amama azụ ọzọ na-egosiputa Apple logo.
3. emelite akụghịna égwu
Emelite akụghịna ngwa ọdịnala ndị ọhụrụ version nke bụ dakọtara na iOS 8, ọ nwere ike idozi na ngwa ọdịnala okuku on iOS 8 ukwuu n'ime.
4. Upgrading ọhụrụ iOS mmelite
Ọ bụrụ na emelite ọhụrụ ngwa version ka ike ghara idozi nsogbu, eleghị anya ị chọrọ imelite gị iOS 8 ka ọhụrụ kwa, ndị Apple ga na hapụ na-asọ ndị dị otú ahụ mmelite ọrụ idozi nsogbu ndị dị ka ngwa okuku on iOS 8.
5. Weghachi Your iDevice
Iweghachi gị iDevice idozi na ngwa ọdịnala okuku on iOS 8 bụ nke ikpeazụ nhọrọ i nwere ike na-agbalị. Ị mkpa iji nweta izugbe ntọala iji tọgharịa ngwaọrụ gị factory ọnọdụ. Ma biko cheta na ndabere gị data n'ọdịnihu, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe resetting ga-ehichapụkwa niile nke data na ngwaọrụ gị.
N'ozuzu-ekwu okwu, n'elu 5 ngwọta nwere ike idozi ọtụtụ ndị na-eji ngwa okuku nsogbu, mgbe ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị ọzọ dị irè ngwọta ịkekọrịta ma ọ bụ ka ike ghara idozi nsogbu mgbe na-agbalị ha niile, na ị na-nabatara ka ikwu okwu n'okpuru.